उपत्यकामा ह्वात्तै बढ्यो कोरोना, नियन्त्रण बाहिर जाने चिन्ता - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएका मानिसको सङ्ख्या ६६० पुगेको छ । सोमबार उपत्यकामा थप ५१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या ६६० पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबार काठमाडौंमा ४३ जना, भक्तपुरमा पाँच जना र ललितपुरमा तीन जना संक्रमित थपिएका थिए । योसँगै काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या ४९२, ललितपुरमा १०७ र भक्तपुरमा ६१ पुगेको छ ।
आइतबार उपत्यकाको काठमाडौंमा २२, ललितपुरका आठ र भक्तपुरमा एक जना गरेर ३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौंमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको बताए । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाहरू राम्ररी पालना नभएको र यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने उनले चेतावनी दिए ।
याे पनि पढ्नुस काठमाडौं उपत्यकामा २५ स्थान सिल, कहाँ कति ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढेको बताए । मन्त्री ढकालले संक्रमण अझै बढ्दै गयो भने उपत्यकामा कुनै पनि बेला भयावह स्थिति आउने बताए ।
उनले काठमाडौंजस्तो ठूलो जनघनत्व रहेको वस्तीमा संक्रमण सल्कियो भने त्यो नियन्त्रण बाहिर जाने बताए । कोरोना संक्रमितहरू दिनदिनै बढ्न थालेपछि नेपालमा सरकारले फेरि लकडाउन जारी गर्न सक्ने चर्चा भइरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले प्रभावित जिल्लाहरूको अवस्था हेरेर लकडाउनबारे निर्णय लिइने बताए ।
याे पनि पढ्नुस थप ५० जनामा देखियो कोरोना, को हुन् संक्रमित ? (सूचीसहित)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि फेरि लकडाउन गर्नेनगर्नेबारे विषयमा जनस्वास्थ्य विज्ञसँगको छलफलमा जुटेका छन् ।
लकडाउन हटाउने घोषणासँगै मानिसको आवतजावत बढेपछि काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को जोखिम दैनिकरूपमा बढ्दै गएको छ । कोभिड–१९ बाट बच्नका लागि सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमित भेटिएका स्थानः
काठमाडौंः कपुरधारा, कपन, चन्द्रागिरि, मैचीदेवी, मरुहिटी, कीर्तिपुर, पुरानो बानेश्वर, शंखमुल, चाबहिल, बालुवाटार, धुम्बाराही, महाराजगन्ज, तारकेश्वर, सीतापाइला, मनमैजु, नैकाप, गल्फुटार, कलंकी, धापासी, गोकर्ण, वसुन्धारा, बाफल, रानीवन, हाँडीगाउँ, कोटेश्वर, ट्याङ्लाफाँट, तीनकुने, खुसिबु, कागेश्वरी, टोखा, मूलपानी, काँडाघारी, साँखु, बौद्ध, बागबजार, वनस्थली, ताहाचल, सामाखुसी, टेकु, कुलेश्वर ।
याे पनि पढ्नुस क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका मेयरलाई कोरोना संक्रमण
भक्तपुरः सल्लाघारी, दुवाकोटा, बागेश्वरी, दुधपाटी, बालकोट, गठ्ठाघर, बोडे, भोलाछे ।
ललितपुरः महालक्ष्मी, महालक्ष्मी स्थान, बुङ्मति, लुभु, लगनखेल, सानेपा, ठैब, पाटन, गोदावरी, सुनाकोठी, धापाखेल, हरिसिद्धि, हात्तीवन, चापागाँउ, भैंसेपाटी, नख्खु, प्युटार, चौघरे, जावलाखेल, गोटीखेल, कुपण्डोल, ग्वार्को, ठेचे ।
बढी जोखिम क्षेत्रः बैंक तथा वित्तिय संस्था, सार्वजनिक स्थान, पार्क, सार्वजनिक यातायात, होटल तथा रेष्टुरा आदि ।
ट्याग्स: काठमाडौं उपत्यका, कोरोना भाइरस, स्वास्थ्य मन्त्रालय